ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်( အခြေခံ ) သင်တန်း(ကော့သောင်း) အမှတ်စဉ်(၃၇/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက် ကော့သောင်းခရိုင်၊ ကော့သောင်းမြို့ရှိ Victoria Cliff Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒေသဆိုင် ရာ ဧည့်လမ်းညွှန်(အခြေခံ)သင်တန်း (ကော့သောင်း) အမှတ်စဉ် (၃၇/၂၀၁၈) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်း အနားသို့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက် နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားဧည့်သည်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေမြေတောတောင် သဘာဝအလှများ၊ ခရီးသွားဆွဲဆောင်သည့်နေရာများ၊ တိုင်းရင်း သားတို့၏ မတူကွဲပြားသည့် ရိုးရာယဉ် ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များ၊ လူနေမှုဘ၀ပုံစံများကို ကြည့်ရှုလေ့လာ...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၁၂) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိရာ လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းများဖြင့်သာမက နယ်စပ်ဝင်/...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၉)ရက် အင်း​တော်​ကြီး ဇီဝအဝန်းနယ်​​မြေ ​ရေရှည်​တည်​တံ့ခိုင်​မြဲ​ရေး (၂၀၁၈-၁၉ မှ ၂၀၂၂-၂၃ ထိ) ၅ နှစ်​တာကာလ စီမံချက်​သုံးသပ်​အကြံပြုခြင်းဆိုင်​ရာ အလုပ်​ရုံ​ဆွေး​နွေးပွဲကို ၅-၇-၂၀၁၈ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ​...
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၉) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာများ ၀န်ဆောင်မှုအဆင့်အတန်း တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင် စေရန်နှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်း...
Coordinating Meeting for the participation in JATA Tourism Expo 2018 and for the implementation of Digital Marketing
Yangon, 8th July,2018 The Union Minister of the Ministry of Hotels and Tourism, U Ohn Maung attended and delivered an opening speech in the coordinating meeting for the participation in JATA Tourism Expo 2018 and the implementation of Digital Marketing on behalf of...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအုန်းမောင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Ichiro MARUYAMA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၆)ရက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမောင်သည် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့နံနက် (၁၀:၃၀)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်...
Nay PyiTaw , June (6) Tourists are continually visiting Myanmar to explore natural resources, tourist destinations, customs and traditions, lifestyles of different ethnic groups through International gateways and Border Gates. From June 29 th toJuly 5th in 2018,it is...
International tourists visited to Myanmar by their own vehicles
Nay Pyi Taw July (6) Ministry of Hotels & Tourism is arranging to be convenient for visiting international tourists to Myanmar. Furthermore, Ministry of Hotels & Tourism arranged to visit Myanmar not only by air and water but also from border gates. Then,...
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ- (၂၁) ရာစု ပင်လုံတတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး အတွက် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဇူလိုင်လ (၅) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင်လုံ တတိယ အကြိမ်အစည်းအဝေး အတွက် ဧည့်ခံကျွေးမွေးရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့ နေ့လည် (၁း၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ...